Bengamabala Dark & ​​anozizi
Iizangqa Dark & ​​sivakale sidumbile
Ukuphakamisa & uzinzo & elwe & Massage
Awabi & Ukuqaphela
Cleanser & ebusweni weplishi
izicelo zingaphendula ngokucothayo
Eye & imilebe ukhathalelo
Ngesandla & Body ukhathalelo
INkqubo: Label Private
ukhetho lwakho imveliso
Ukukhetha imveliso layini yakho Skin ingaba inkqubo kakhulu, kodwa abahlobo bethu intengiso abanolwazi ukuba ngobungcali baqeqeshelwa ukuba Izakukhombisa inkqubo kunye lula. Bafundiswa ukuba ukubuza imibuzo efanelekileyo, elikuvumela ukuba ukwakha ukhetho lwakho lwemveliso kwamandla kunye ngobungcali; ngoxa esazi ukuhlangabezana neemfuno clientele.You wakho uya kuhlola umgca yethu yonke imixube eliphezulu, ukukhetha imveliso yakho odola iisampuli apho kuyimfuneko sivavanye iimveliso zakho phambi ukhetho. Kwaye, kungaze kubekho ngesityholo thethwano imveliso yakho.
Ukukhetha Packaging bakho
Xa ukhetho lwakho imveliso sele ukhethiwe, umqondisi-akhawunti yakho Izakukhombisa ukhetho zethu ukuphakheja. kanti ingaba umsebenzi loyikekayo, siya kwenza kube lula kuwe. Emva imibuzo embalwa engundoqo malunga nombono yakho mali, intengiso zakho nabo kuya kukunceda ukhethe uluhlu iinketho zemveliso ukuphakheja ukwenza oluhlangeneyo, kwi-brand look.
Ukuseka Ungubani Brand
Ngoku ukuba iimveliso zakho Skin lwethikh nababucala ekhethiweyo neepakethe yakho iye ekhethiweyo, uya udlulela kokuxoxa brand yakho. Kubalulekile ukuba uqonde WHO na ngokuthengisa, kwakunye WHO wena njengenkampani, ukudala ujongo ekho kunye nawe kunye nabathengi bakho.
Eyila Packaging bakho
Xa leshishini sele lusekiwe, kunye neemveliso zakho nokupakisha ekhethiweyo, siya ugqithele ukuba umyili ukuphakheja yakho. E YunYang Cosmetic, oku kungaphezulu nje i logo ukuya ileyibhile obabukho, le yinkqubo yoyilo ukuba ukuguqulela brand yakho phezu iimveliso yakho Skin.
Iqela lethu design liya kuyila enye iinguqulelo iilebhile wakho ukuba ubuyekeze ngekhompyutha nokunika ingxelo. Inkqubo yethu lilungelelanise lokudala zombini kakuhle kwaye zinempumelelo, ukuqinisekisa ukuba ixesha ngokukhawuleza sotshintsho kunokwenzeka.
Ukuthengisa & Ukuthengisa Product wakho
inkxaso yethu ayipheli ngenxa nje yokuba ufumene label zabucala umgca yakho entsha Skin. Iqela lethu yeengcali afundile kuya kuqhubeka ukuba ikunike ulwazi kunye nesikhokelo kufuneka sibhengeze ngempumelelo nokuthengisa imveliso yakho. Ukusuka database yethu yinto intanethi, iingcali zethu Skin on-abasebenzi, siza kukunika ezi nkcukacha kufuneka ube nempumelelo kurhwebo Skin le.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga Label Private nendlela ukuqalisa, qhagamshelana nathi kunye nommeli wakho entsha akhawunti aya kukuvuyela ukukunceda.
YunYang Cosmetic uya kusoloko ikunike, zonyango iimveliso Skin kwibakala phambili ukuba inkampani yabucala. Emva kweminyaka engaphezu kwama-15 kushishino Skin umsebenzi, iimveliso zethu ziye ekhulisa ngaphandle iminyaka yophando, uvavanyo kunye nengxelo.
Kuyo yonke le minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, siye sagqiba ukuba yeyona ndawo ibaluleke kakhulu inkqubo label zabucala kukuqinisekisa ukuba uyaqonda wena, uphawu lwakho, kunye neenjongo zakho - ungaphinda, umbono wakho. Yiyo loo nto iingcali zethu intengiso abaqeqeshwe kakhulu ukusebenza nawe ukuba Izakukhombisa inkqubo ileyibhile abucala; kokubuza imibuzo ukunceda ayisondeze umgca mveliso ogqibeleleyo zabaxhamli beenkonzo zakho.
E YunYang Cosmetic, ingqwalasela yethu ngempumelelo line yakho Skin, kwaye sizibophelele ngaphezulu ozilindele konke oku.
Khanyisa Product Quick Around Times
Ulwazi Skin Iingcali
In-indlu ngemizobo uMyili Team
isiphakamiso ukuphakheja Professional
Ulwazi Product Free & Training
No. 18, West Street, yesine Cooperative loQoqosho, uDali Village, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou
Matcha lodaka Vuvu , Vuvu yobuso , ebusweni Vuvu Sheet , mhlophe serum, Sheet Vuvu , Ubuso Vuvu Sheet ,